Isku-darka guusha ee badeecada, doorashada, iyo qiirada | Martech Zone
Sabtida, Juun 17, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
The Jellyvision Lab ayaa soo saaray eBook yar oo la yaab leh oo ku saabsan sida loo soo bandhigo xulashooyinka wax soo saarka. Buug-gacmeedka ayaa isbarbardhigaya dabeecadaha dukaamaysatada dukaamada waaweyn iyo kuwa internetka waxayna bixinayaan caddeyn ah in dabeecadaha ay isku mid yihiin
Waxaad u maleyn kartaa in supermarket-ku uu aad u weyn yahay, laakiin Jellyvision waxay na xusuusinaysaa inay jirto qadar aan xadidneyn oo shabakada ah, iyo sida aad u soo bandhigeyso alaabadaada iyo adeegyadaada ay waxbadan ka badali karaan. Waa kuwan casharradii laga bartay (nuxurka laga soo xigtay oo laga soo xigtay eBook):
Alaabooyin Badan, Macaamiil Farxad Leh - Haddii aad isku daydo inaad yeelato degel raalli geliya qof walba, waxaad abuuri doontaa wax uusan qofna jeclayn. U samee qaybo kala duwan si ay u jeclaadaan qayb kasta. U suuqgee badeecada saxda ah macaamiisha saxda ah. Kheyraadka: Ketchup Conundrum.
Laakiin choices Doorashooyin badan, Iibsiin Yar - Xulashooyin badan oo isla bogga kujira ayaa jahwareerinaya dadka soo booqda wayna bixi doonaan. U sii qaybo iyo miirayaal si ay u qariyaan waxa aysan u baahnayn.
Dareen ma jiro, Go'aamo ma lahan - Dareen la'aan, maskaxdu waxay falanqaysaa oo isbarbar dhigtaa, falanqaysaa oo isbarbar dhigtaa, lafagurtaa oo isbarbar dhigtaa iyada oo aan go'aan laga gaadhin - waxaad noqotay cillad jir ahaaneed. Caadifaduhu waa waxa dhabta kuu suurta geliya inaad go aansato inta udhaxeysa xulashooyinka kala duwan.
Buugga elektaroonigga ah wuxuu ku sii socdaa faahfaahin aad u tiro badan wuxuuna soo celinayaa dhammaan gabagabada. Soo dejiso markii aad fursad u hesho oo hubi inaad raacdo barta 'Jellyvision', Wadahadalka.
Jul 19, 2010 markay ahayd 10:34 AM
Ma ahan taageere Ketchup waxaan ka helay Ketchup Conundrum aqrin xiiso leh oo xiiso leh. Waxay u muuqataa inay jiraan cashar suuqgeyn ah oo ku yaal halkaas.